24-38V Constant Ugbu a 4.2A Led Street Lights Driver China Manufacturer
Home > Ngwaahịa > Ọkwọ ụgbọala na-enwu ọkụ n&#39;ahịa > Ọkụ ụgbọala na-acha ọkụ ọkụ n&#39;okporo ámá > 24-38V Constant Ugbu a 4.2A Led Street Lights Driver
Ihe Nlereanya.: FD-160H-038B
FD-160H-038B, nke a kwadoro maka ọkụ ọkụ Windows, na-eme ngwa ngwa Floodlights, iji rụọ ọrụ n'ozuzu ọhụụ nke Ọpụpụ. Flickr na-aga n'ihu ugbu a n'efu 0-10V / PWM / RX dimming, na elekere anya nke 160W, UL, FCC, CE na-erube isi, arụmọrụ voltage dum nke IP67 Nwepụta ọkwọ ụgbọala na-adịghị mma. Nkeji ndị ahụ kwesịrị ekwesị maka iduzi okporo ụzọ okporo ụzọ & Canopy na floodlights wdg. Ihe ndị ọzọ mara mma nke oke gụnyere 100-277V , nchebe megide obere circuit, n'elu ibu na thermal ruo 110 Celsius C, gafee akụkụ dum nke unit ahụ.
Max. Mmepụta ugbu a: 4200mA
FD-160H-054, n'èzí na-enye 12V ike ọkọnọ ọkwọ ụgbọala na-adịgide adịgide mgbe niile , Flicker free 0 / 1-10V / PWM / RX dimming, Wụnye mgbanaka okporo ụzọ, Desigen maka ọkụ dị ọkụ Epeepe ọkụ na-acha ọkụ. Ọkwọ ụgbọala na-ahụ maka ume. Ejiri Aluminom rụọ ụlọ ya, ntinye onwe ya maka usoro njikọ njikọta ya, nke kwesịrị ekwesị maka ahịa Europe na North America.
UL ọkwọ ụgbọ ala 30W 750ma 40v ìhè panel Kpọtụrụ ugbu a
(CV) Voltage Constante 24V LED Drivers Power supplies Kpọtụrụ ugbu a
UL Panel ọkụ Ọkwọ ụgbọala na 0-10v Dimming Kpọtụrụ ugbu a
Linear LED High Bay Light 80W Led driver Kpọtụrụ ugbu a